ကားဒိုင်ခွက်ထဲက အန္တရာယ်အရှိဆုံး ချက်မီး (Check Light) ၅ မျိုး
ယနေ့ခေတ်ပေါ်ကားတိုင်းလိုလို ကား Instrument Panel လို့ခေါ်တဲ့ ကားဒိုင်ခွက်ထဲမှာ ကားမှာပါဝင်တဲ့ စနစ်အမျိုးမျိုးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အချက်ပြသင်္ကေတ အမျိုးမျိုးပါဝင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအချက်ပြ သင်္ကေတအများကြီးထဲကမှ ကားတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ်ပါဝင်တဲ့ ကားမောင်းသူတိုင်းအတွက် မဖြစ်မနေ သိသင့်သိထိုက်ဆုံး၊ အန္တရာယ်အရှိဆုံး Check Light ၅ မျိုးကို စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဒီမီးက ကားအင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မီးဖြစ်ပြီး တချို့ကားတွေမှာဆို အနီရောင်ဆီကတော့ပုံ၊ တချို့ကားတွေမှာဆို အဝါရောင်ဆီကတော့ပုံလေးဖြစ်ပြီး၊ ကားတိုင်းလိုလို မရှိမဖြစ်ပါဝင်ပြီး ကားအင်ဂျင်အတွက် အကြီးကြီးပြဿနာပေး ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ အချက်ပြမီးပါ။
ဒီမီးလေးက ကားသော့ “On" လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒိုင်ခွက်ထဲမှာလင်းနေမယ်။ ကားစက်နှိုးလိုက်လို့ စက်နှိုးသွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ဒီမီးလေးငြိမ်းသွားရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် ကားမှာအင်ဂျင်ဝိုင်တွေရှိနေမယ်၊ စက်နှိုးသွားတဲ့ အချိန်မှာလည်း ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်တွေက သတ်မှတ်နေရာ အသီးသီးကိုရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ ကားမောင်းဖို့စက်နှိုးတယ်ဆိုတိုင်း ကားစက်နှိုးသွားတာနဲ့ မဖြစ်မနေသတိပြုရမယ့် ပထမဆုံး ချက်မီးက ဒီ အင်ဂျင်ဝိုင်ချက်မီးပါပဲ။ ကားစက်နှိုးသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်စေ၊ ဒါမှမဟုတ် ကားမောင်းနေရင်းဖြစ်စေ ဒီ အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံစံ မီးလေး ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ လင်းလာတယ်ဆိုရင် (ဝါ) ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် ပေါ်လာတယ်ဆိုရင် ကားဆက်မောင်းဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး။
ဒီ အင်ဂျင်ဝိုင် ချက်မီးက ဘာကြောင့် ပေါ်လာတတ်သလဲ?
Engine Oil Level လျော့တာ ၊ Engine Oil မရှိတာ
Oil Filter ပိတ်ဆို့တာ
Engine Oil Pump မကောင်းတာ
Engine Oil Line တွေ ပိတ်ဆို့တာ
Engine Oil Pressure Sensor (or) Switch မကောင်းတာ
ဒီ အင်ဂျင်ဝိုင် ချက်မီးလင်းလာတယ် ဒါမှမဟုတ် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ခုန်လာတယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
ကားမှာ အင်ဂျင်ဝိုင် ရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ပါ
ကားအင်ဂျင်ဝိုင်တွေ ယိုစိမ့်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ပါ
ကားအင်ဂျင်ဝိုင်တွေ ညစ်နေလား ၊ မဲနေလား စစ်ဆေးကြည့်ပါ
အယိုအစိမ့်တွေလည်း မရှိဘူး၊ ကားအင်ဂျင်ဝိုင်လည်း မညစ်သေးဘူးဆိုရင် ကားအင်ဂျင်ဝိုင်ထည့်တဲ့အဖုံးကိုဖွင့်၊ စက်နှိုးကြည့်ပြီး အင်ဂျင်ဝိုင် တက်မတက်ကြည့်ပါ
အင်ဂျင်ဝိုင်တွေ မရှိတော့ဘူး၊ ယိုစိမ့်နေတယ်၊ အင်ဂျင်ဝိုင် အရမ်းညစ်နေတယ်၊ အင်ဂျင်ဝိုင် မတက်တော့ဘူး ဆိုရင်တော့ ကားဆက်မောင်းဖို့ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။
ကားမှာပါတဲ့ ချက်မီးမျိုးစုံထဲက Low Engine Oil Pressure မီးဟာ အင်ဂျင်တစ်ခုလုံး ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ချက်မီးတစ်ခုပါ။ ဒီမီးလင်းတာကို မသိလို့ သတိမထားမိလို့ အင်ဂျင်တစ်ခုလုံး ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့ ကားတွေမနည်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် သတိထားဖို့ အလိုအပ်ဆုံး ချက်မီးအနေနဲ့တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Coolant Temperature Warning Light ဆိုတာက ကားအင်ဂျင်တစ်ခုရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အင်ဂျင်အပူချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့ အချက်ပြသင်္ကေတပါ။ ဒီချက်မီးက ကားအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ ပုံစံကွဲတတ် ပါတယ်။
သာမိုမီတာပုံစံလေးပါ၊ ပုံမှန်အချိန်မှာ အပြာရောင် အစိမ်းရောင်လေးရှိတတ်ပြီး ကားအင်ဂျင် Over Heat တက်လာတဲ့ အချိန်မှာ အနီရောင်ပြတတ်ပါတယ်။
H (Hot) နဲ့ C (Cool) ပါဝင်တဲ့ လက်တံသင်္ကေတနဲ့ ဖော်ပြတဲ့ ပုံစံဆိုပြီး နှစ်မျိုးကွဲပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ပုံဆိုရင် လက်တံက Hot ကို ရောက်နေပြီး အင်ဂျင် Heat တက်နေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုရင် ကားမောင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီလက်တံက H နဲ့ C ရဲ့ကြား အလည်မှာ အမြဲရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Engine Coolant Temperature Warning Light ကတော့ ကားမောင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ အမြဲ သတိထား ကြည့်ရမယ့်ချက်မီးတစ်ခုပါ။
ကားမောင်းနေတဲ့အချိန် အပေါ်ပုံမှာပြထားသလို အနီရောင်မီးလင်းလာမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အောက်ပုံမှာ ပြထားသလို လက်တံက H (Hot) နားထိ ရောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အင်ဂျင် Over Heat ဖြစ်နေပါပြီး ကားဆက်မောင်းဖို့မသင့်တော့ပါဘူး။ ကားအင်ဂျင်တစ်ခုလုံး ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။
Engine Coolant Temperature Warning Light ဘာကြောင့်ပေါ်ရသလဲ?
ဒီချက်မီးလင်းလာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ အင်ဂျင်အအေးပေးစနစ် Cooling System မှာ တစ်ခုခု ချို့ယွင်းလို့ပါပဲ။
ရေတိုင်ကီ အဖုံးမကောင်းတာ (Pressure Cap)
သာမိုစတတ် (Thermostat) မကောင်းတာ
ရေလည်အုံ (Water Pump) မကောင်းတာ တွေကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အင်ဂျင် Heat တက်ပြီး ကားထိုးရပ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့
စက်ဖုံးကိုလှပ်ပြီး အင်ဂျင်ကို အအေးခံပါ။
ရေတိုင်ကီအဖုံးကို ပူနေချိန် လုံး၀ (လုံးဝ) သွားမဖွင့်ပါနဲ့၊ အေးတဲ့အချိန်ထိစောင့်ပါ။
ကားမှာ ရေတွေယိုနေသလား၊ ပိုက်တွေပေါက်နေလား၊ ကွဲနေလား စစ်ပါ။
အင်ဂျင် အရမ်းပူနေချိန် ရေအေးတွေနဲ့ လောင်းတာ၊ ရေအေးတွေ ရေတိုင်ကီထဲ အတင်းဖြည့်တာမျိုးရှောင်ကျဉ်ပါ။
ကျွမ်းကျင်စက်ပြင်ဆရာခေါ်ပြီး စစ်ဆေးပါလို့အကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ် ။
ဒီချက်မီးကတော့ အနီရောင်ဘက်ထရီအိုးပုံစံချက်မီးလေးဖြစ်ပြီး ကားအားသွင်းစနစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်ပြမီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီချက်မီးလေးကလည်း ကား အင်ဂျင်ဝိုင်မီးနဲ့ သဘောသဘာ၀ ဆင်တူပြီး ကားသော့ “On" လိုက်တဲ့ အချိန်မှာလင်းနေရမှာဖြစ်ပြီး ကားစက်နှိုးလိုက်လို့ စက်နှိုးသွားတယ်ဆိုရင် ဒီမီးလေး ငြိမ်းနေရမှာပါ။
ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ စက်နှိုးသွားသည့်တိုင် ဒီဘက်ထရီအိုးပုံမီးလေးလင်းနေမယ် ဒါမှမဟုတ် ကားမောင်းနေရင်း ဒီချက်မီးလေးလင်းလာတာ (ဝါ) ဒီဘက်ထရီအိုးပုံလေး ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက် ဖြစ်လာတာက ကားအားသွင်း စနစ်တစ်ခုခု ချို့ယွင်းလာတဲ့ သင်္ကေတပါပဲ။
ဒီချက်မီးလေးက အပေါ်ကနှစ်ခုလို ကားအင်ဂျင်ပျက်စီးစေနိုင်လောက်သည်အထိ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဒုက္ခမပေးတတ်ပေမယ့် ခရီးသွားရင်းစက်သေ၊ ထိုးရပ်တတ်တာမို့ ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ မီးထဲမှာပါပါတယ်။
ဒီ Charging System Warning Light လင်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ ကားအင်းသွင်းစနစ်ရဲ့ အဓိကဖြစ်တဲ့
Alternator နဲ့တွဲစပ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ Belt ကြိုးပျက်တာ၊ ချောင်တာ
Alternator ထိပ်က Pulley Ball and Bearing တွေ စားသွားပြီး Free အဖြစ်လည်ပတ်နေတာ၊
အော်တာနေတာ အတွင်းပိုင်းထဲက Carbon Brushes တွေကုန်သွားတာ၊ တိုသွားတာ၊ ငုတ်အတိုအရှည်ပွန်းစားတာ မညီတာ
အတွင်းမှာ သံလိုက်ဆွဲအားမညီဘဲ တစ်ဖက်ဆွဲပြီး အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းတွေပွတ်တိုက်တာ
ဒိုင်အုတ်တွေပျက်စီးပြီး Voltage မငြိမ်တာ၊ အားမဝင်တာ
IC regulator တွေ ပျက်စီးပြီး Voltage အားအတက်အကျ ပြောင်းလဲနေတာ
Battery မကောင်းတာ၊ သက်တမ်းလွန်တာ တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို Charging System Warning Light လင်းလာပြီဆိုရင်တော့ Battery မှာရှိတဲ့ Voltage ဗို့အားကို မီတာနဲ့တိုင်းတာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ Battery တစ်လုံးက 12.60 V လောက်ပျမ်းမျှရှိပြီး ကားစက်စစနှိုးလိုက်တဲ့ အချိန် Starter Motor ကိုစဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ထိုးကျသွားတဲ့ ဗို့အား Voltage Drop က 11. V ကနေ 10. V ထိပဲဆင်းသွားရမှာပါ။ ဒါကအားပြည့်နေတဲ့ ဘက်ထရီအိုးကောင်းတစ်လုံးအတွက်ပါ။ 11.V ကနေ 10.V အထိပဲ ဆင်းတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဘက်ထရီကို စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်၊ ခရီးသွားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကား လမ်းမှာ ဘက်ထရီဝပ်စရာမရှိနိုင်ပါ။ အသုံးပြုထားတာအနည်းငယ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အိုးတွေကိုတိုင်းတာကြည့်ရင်တော့ ကားစက် စနှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ 9.5V ကနေ 8.5 V လောက်ထိ ဗို့အားထိုးကျသွားတတ်ပါတယ်။
ကားစက်စနှိုးလိုက်တဲ့အချိန် သင့်ကားဘက်ထရီဗို့အားက 8V အောက်ဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့၊ ခရီးသွားဖို့ ဘယ်လိုမှ စိတ်မချရတော့ပါဘူး။ ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်တော့ အဆင်ပြေနေပြီး ကားစက်သတ်ရပ်နားပြီးပြန်နှိုးချိန်မှာ ဘက်ထရီအားကျကာ စက်ပြန်နှိုးလို့မရတဲ့ပြဿနာနဲ့ ကြုံတွေရနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ ကားအော်တာနေတာတစ်လုံးရဲ့ Voltage က 13.50 V ကနေ 14.50 V လောက်ထိ ပျမ်းမျှရှိပါတယ်။ ကားစက်နှိုးထားပြီးဘက်ထရီမှာ တိုင်းတာလိုက်လို့ 13 V အောက်ကျနေတာ ဒါမှမဟုတ် 14.50 V ထက်ကျော်လွန်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ သင့်ကားအော်တာနေတာရဲ့ အားသွင်းစနစ်တစ်ခုခုပျက်ယွင်းနေပါပြီ။
ဒီလိုမျိုး ဘက်ထရီအိုးမကောင်းတော့တာ၊ အားသွင်းစနစ်ရဲ့အဓိက မိန်းဖြစ်တဲ့ Alternator မကောင်းတော့တာတွေကြောင့် ဒီ Charging System Warning Light ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီမီးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ ကားဆက်မောင်းဖို့ မသင့်ဘဲ နီးစပ်ရာကျွမ်းကျင်ကားဝပ်ရှော့တွေမှာ ကားအားသွင်းစနစ်နဲ့ ဘက်ထရီကိုစစ်ဆေးပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတာယာပုံစံ မီးလေးကတော့ TPMS (Tire Pressure Monitoring System) ကနေ ကားမှာပါဝင်တဲ့ တာယာတွေရဲ့ လေပေါင်ချိန်မှန်/မမှန်ကိုတိုင်းတာပြတဲ့ စနစ်တစ်ခုပါ။
ဒီမီးပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ တာယာလေပေါင်ချိန်မမှန်တာ၊ လမ်းသွားရင်း ကားတာယာ ပေါက်တာ၊ လေစိမ့်တာ၊ ကားတာယာ လေလျော့တာ၊ လေများတာ အစရှိတာတွေကြောင့် ဒီမီးလင်းတာ များပါတယ်။ တချို့ကားတွေမှာတော့ Spare Tire လေလျော့ရင်လည်း ဒီမီးလင်းတက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် Land Cruiser ကားတွေမှာဆိုရင် စပယ်ရာတာယာရဲ့ လေပေါင်ချိန်ကို တိတိကျကျ ချိန်တွယ်ထိုးပေးဖို့လိုပါတယ်။
ကားမောင်းနေရင်း ဒီမီးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ ကားစက်ရပ်ပြီး ကားတာယာတွေကို သတိပြုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမြန်လမ်းတွေမှာ ကားမောင်းနေတဲ့အချိန် ကားတာယာ လေပေါင်ချိန်မမှန်တာ၊ ကားတာယာပေါက်တာ၊ ကွဲထွက်တာတွေကြောင့် ကားနဲ့လူ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင့် ကားမောင်းရင်း ဒီမီးလင်းလာတယ်၊ ပေါ်လာတယ်ဆိုရင် အထူးသတိပြု စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ဒီ ABS ဆိုတဲ့ Warning Light တွေကတော့ Brake (ဘရိတ်) စနစ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မီးဖြစ်ပြီး Anti-Lock Brake System ကိုရည်ညွှန်းတာပါ။ ဒီစနစ်က ကားကိုအရှိန်နဲ့မောင်းနေတဲ့အချိန် ရုတ်တရက် ဘရိတ်ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါ ကားစတီယာရင်ကိုအသေမဖြစ်စေဘဲ လိုသလိုကွေ့နိုင်ခေါက်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးတဲ့စနစ်ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီမီးပေါ်လာတယ်ဆိုရင် ကားအရှိန်နည်းနည်းနဲ့မောင်းနေချိန်တွေမှာတော့ အန္တရာယ်သိပ်မရှိနိုင်ပေမယ့် ကားကိုအမြန်လမ်းလို နေရာမျိုးမှာမောင်းနှင်နေချိန် ကားဒိုင်ခွက်ထဲမှာ ဒီမီးလင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကားမှာပါတဲ့ ABS စနစ်တွေ အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်လို့ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ Check Light ထဲထည့်သွင်း ဖော်ပြထားရပါတယ်။
ဒီ ABS မီးလင်းရတဲ့ အများဆုံးအကြောင်းရင်းတွေကတော့
Wheel Speed Sensors (ဘီးလည်ပတ်မှု အာရုံခံစနစ်) တွေ
Hub ball အစရှိတာတွေ တစ်ခုခုချို့ယွင်းပျက်စီးခဲ့မယ်ဆိုရင် ABS မီးလင်းလာပါမယ်။
ဒီ ABS မီးလင်းလာရင်ကတော့ ကားကိုမြန်နှုန်းမြင့် မောင်းနှင်တာမျိုးကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပြီး ကျွမ်းကျင်ဝပ်ရှော့တွေမှာ အမြန်ဆုံးပြသပြုပြင်သင့်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြထားတဲ့ Check Light5မျိုးဖြစ်တဲ့
အစရှိတဲ့ အချက်ပြမီးတွေက ကားမောင်းသူတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားရမယ့် ကားအင်ဂျင်ပိုင်းနဲ့ကားမောင်းသူကို အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်သည်အထိ ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ချက်မီးတွေပါ။ ဒါကြောင့် ဒီချက်မီးတွေကို သေချာသတိပြုလေ့လာမှတ်သားထားသင့်ကြောင်း စေတနာထား တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတများကြွယ်ဝပြီး အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းကြပါစေခင်ဗျာ။
မြန်မာ့ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ (၂၀၂၀) ကို တပ်မတော်ခန်းမ၌ ကျင်းပလျက်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သေတ္တာတင်မော်တော်ယဉ်များအသင်း သတ္တမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကျင်းပ
ကားမှာပါတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Safety Lock ၃ မျိုး
နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်အတွင်းကို ဝင်ရောက်နေရာယူဖို့ရှိနေတဲ့ လေမဲ့တာယာများ
ကားအိတ်ဇောမှာပါတဲ့ ကျောက်ဆန်ခါတွေမကောင်းဘူးဆိုရင် သိနိုင်မယ့် အချက် ၆ ချက်
စမတ်ဖုန်းဟောင်းတစ်လုံးမှ ဒက်ရှ်ဘုတ်ကင်မရာ (Black Box camera) အဖြစ်သို့
ဟောလိဝုဒ်အိမ်နိမ့်စံမင်းသားကြီး Nicolas Cage ရဲ့ စီးတော်ယာဉ်များ
တွမ်ခရုစ်ရဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ထဲက တန်ဖိုးကြီးကားများ
Keanu Reeves နဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်ခြင်း အနုပညာ